Farraare - Gpedia, Your Encyclopedia
Farraare (Af Ingiriis : Mars; Af carabi: المريخ) sidoo kale loo yaqaano Mariikh iyo Meeraha guduudan, waa meere ka mid ah meereyaasha Bahda Midaysay Qoraxdu. Magaca meeraha guduudan waxaa loogu bixiyay midabka uu leeyahay markii cirka laga fiiriyo oo ah midab casaan ah. Farraare wuxuu lee yahay jawi aad u khafiif ah oo badankiisu ka samaysan Kaarboon-labo-ogsaydh. Wuxuu kaloo lee yahay in yar oo Nitrojiin, Argon iyo Ogsajiin.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Farraare&oldid=193039"